Sina FFP2 NR FIZARANA MANARAKA MASAL MASO Mpanamboatra sy mpamatsy | Summit
Vata fitahirizana sarontava
FFP2 NR FIZARANA MANARAKA SORATRA MASINA
Ny famolavolana endrika tsy manam-paharoa amin'ny tariby orona azo ovaina sy ny tadin'ny loha tsy misy lateks dia natao ho an'ny aina tsara indrindra ary mifanaraka amin'ny endrika endrika hafa miaraka amin'ny famoahana kely indrindra.
Fitehirizana: Ataovy anaty toerana maina sy madio hatrany ny rivotra. Aza atao tara-pahazavana mivantana. Ampirisihina hotehirizina amin'ny maripana -20 ~ + 50 ° C sy ny hamandoana eo ambanin'ny 80%.
Safidy B: 10pcs / polybag, 50pcs / boaty, 48box / baoritra, 2400pcs total isaky ny boaty.
Saron-tava antsasaky ny sivana sombin-tsofina ity dia fantatra amin'ny hoe mason-tava KN95, saron-tava N95 Respirator, saron-tava FFP2, saron-tava fiarovana. Mampiasa akora ambony naoty ambony izahay, ary misy sosona 5 miaraka amin'ny lamba roa mitsonika notsofina, io dia vokatra manatanteraka ny fenitry ny EN149: 2001 + A1: 2009 (EU), GB2626-2019 (CN). Nekena ny FFP2. BFE avo (=> 95%).
Ny tadin'ny sofina elastika dia hiantoka ny fanaovana comforatable. ny sarontava tsirairay dia misy clip orona azo ahitsy mba hamoronana tombo-kase henjana amin'ny tarehy. Ny saron-tava dia manamora ny fifohana rivotra sy mahazo aina kokoa ho an'izay mitondra.
Manoro hevitra hampiasaina amin'ny fisorohana ny aretina amin'ny taovam-pisefoana, ny fikosoham-bary, ny famafazana, ny famafana, ny fandravana, ny fanadiovana ny tadio sns
Ny vokatra dia tsy natao hampiasaina amin'ny fitsaboana, ho an'ny fiarovana ara-pahasalamana manokana, atrikasa tsy misy vovoka sy laboratoara, indostrian'ny famokarana, indostrian'ny serivisy toy ny indostrian'ny fikarakarana sy ny indostrian'ny hatsaran-tarehy, sns. Ary ho an'ny fampiasana indray mandeha ihany.
Tongasoa eto amintsika mba hifandray aminay raha misy ny fanadihadiana ary mifanakalo hevitra momba ny antsipiriany.
Resadresaka amin'ny fahitalavitra faritany Guangdong ...
Ny ben'ny tanàna lefitry ny tanànan'i Dongguan Andriamatoa Wan v ...